Faniriana ho lany amin’ ny fifidianana : Hamidy amin’ ny vahiny ve izany i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFaniriana ho lany amin’ ny fifidianana : Hamidy amin’ ny vahiny ve izany i Madagasikara
Maro amin’ ireo kandida izay mirotsaka hofidiana no faly sy ravo taorian’ ny fanafoanana ny andininy faha-74 sy 75 mifehy ny fifidianana amin’ ny ankapobeny sy ny fitsapan-kevi- bahoaka, io lalàna io izay mandrara ny fahazoana famatsiana ara-bola avy amin’ny firenena na orinasa any ivelany mandritra ny fampielezan-kevitra. Noho izany dia azo heverina fa miverina amin’ ny charte Lambert indray isika eto Madagasikara satria dia malalaka ny fidiran’ ny volan’ ny kandida hanomanana fifidianana, ary fifanarahana mivantana amin’ireo haren’i Madagasikara no takalon’ny famatsiana. Tsiahivina izany atao hoe charte de Lambert izany tamin’ ny andron-dRanavalona voalohany nitondra izay nodimbiasan’ i Radama faharoa, ity farany na mbola tsy tonga teo amin’ ny toeran’ ny mpanjaka akory aza dia efa nifanaraka tamin’ ny vahiny ary nahatonga io Charte de Lambert io. Ny fifanarahana nataony tamin’ izany dia ny fahafahan’ny vahiny mitrandraka harena eto Madagasikara rehefa izy no tonga eo amin’ ny toeran’ny mpanjaka, ary izay no tantaran’ny Charte de Lambert.
Ankehitriny dia hita soritra ny fiverenan’io fifanarahana tamin’ i Lambert , indrindra atomotra ny fifidianana tahaka an-dRadama izay maika handimby an-dRanavalona voalohany. Tsy inona izany fa ny IEM izay nentin’i Andry Rajoelina ary efa nifanarahany tamin’ireo tompon’ orinasa maro tao Paris, izay lasa endrika ivelany fotsiny sisa ny fampahafantarana fa ny fifampiraharahana efa vita. Noho izany ho solon’ny fanohanana ara-bola an’ i Andry Rajoelina amin’ ny fifidianana, dia efa vita ny fifanarahana amin’ ireo vahiny amin’ ny fitrandrahan’ireo orinasa ireo ny haren’i Madagasikara, io izany ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe “Gré à Gré”. Tsy azo lavina ihany koa ve izany ny efa fisian’ny fifanarahana eo amin’ ireo vahiny tompona orinasa sy ny tompon’antoka amin’ny fihaonana tany Paris io tamin’ ny alalan’ny IEM amin’ireo tsenam-barotra rehetra misy eto Madagasikara.Tsiahivina anefa ny vokatry ny fifanarahan’i Lambert fa dia ny fibaben’i Madagasikara trosa, ary dia hiverina amin’ izany indray ve izany isika amin’ izao fotoana izao. Tsy sanatria akory tsy ankasitrahana tokoa ny fisian’ ny mpampiasa vola eto Madagasikara, fa kosa misy ny lalàna mifehy ny varotra eto Madagasikara, ary tokony harahina izany tahaka ny famoahana tolo-bidy sy ny sisa.
Ankoatra ny fifanarahan’i Lambert izay efa nohazavaina teny ambony, dia noho ny fanafoanana ny andininy 74 sy 75 amin’ ny lalàna ankapoben’ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mampanahy be ihany ny fifidianana ho avy. Misy amin’ireo kandida mantsy no efa hita soritra sahady fa mahazo fanohanana matanjaka avy any ivelany. Ireo firenena vahiny sy orinasa vahiny rahateo, izay tsy mihambahamba amin’ny famatsiana ara-bola raha toa misy ny fifanarahana amin’ ireo olona izay fantany fa mety ho lany amin’ ny fifidianana ka hahazoany tombontsoa avy eo. Tsiahivina ny fomba fanaon’i Vincent Bolloré izay mpandraharaha Frantsay iraisam-pirenena , tena matanjaka amin’ny sehatry ny serasera sy ny fanorenana fotodrafitrasa aty Afrika, ka ahiahian’ny fitondrana frantsay fa tamin’ny alalan’ny fanambazana ny mpanao politika na kandida mirotsaka ao amin’ilay firenena no hakany ny tsena hahazoany tombontsoa. Izany tranga izany dia saika tanterahin’ ity mpanefoefo ity amin’ ireo filoha afrikanina izay notohanany rehetra, ka ny fitantanana seranan-tsambo no anisan’ny takiany amin’izany, io izay antony hanenjehan’ny fitsarana frantsay an’ i Vincent Bolloré. Dia ho sanatria ve izany tokony hamidin’ny pastora Mailhol amin’ ny rosianina i Madagasikara, na ihany koa amidin-dRavalomanana amin’ ny Amerikanina satria maika ny ho tsy refesi-mandidy izy ireo.
Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay, ‘ndao hasandratra ny firenena “